Varotra Mango - Ny akanjo fototra ilainao amin'ity vanim-potoana ity | Bezzia
Akanjo fototra izay ho hitanao amin'ny fivarotana Mango
Susana godoy | 14/01/2022 10:00 | Inona no hotafiko
ny Varotra mangahazo Mandondona eo am-baravaranao izy ireo ary afaka mahita fihenam-bidy tena mahavariana ianao izao. Izany no antony tsy tokony hanadinoanao ny fahafahana hankafy ny akanjo tsirairay nofidianay ho anao. Satria mila azy ireo isan'andro ianao satria tena fototra izy ireo.
Ho fanampin'izany dia efa fantatrao fa ny varotra no fotoana mety hahazoana entana vaovao azonao anaovana mandritra ny volana maromaro. akanjo miasa izay ho hitanao ihany koa amin'ity safidy manaraka ity. Tianao ho fantatra ve izany? Mariho tsara ny tsirairay amin'izy ireo mba hankafizana ny fomba tsara indrindra amin'ity vanim-potoana ity!
1 Varotra akanjo manga sy cardigans
2 palitao amidy
3 Akanjo sa zipo?
4 pataloha denim sy overalls
Varotra akanjo manga sy cardigans
Tonga feno ny fivarotana manga hevitra tsara momba ny akanjo ba sy cardigans ihany koa. Izany no antony amin'ny tranga voalohany, dia hahita akanjo malalaka isika, toy ny fitsipika ankapobeny, izay hanome antsika fampiononana ho an'ny andro tsirairay. Saingy tsy izany ihany, satria amin'ny lafiny iray, ny fototra lehibe dia ho eo anilantsika foana, fa ankoatr'ireo, ny pitsopitsony toy ny rhinestones, ny peta-kofehy na ny vozony tapaka dia tsy te hanadino ny matso koa. Izany no antony ahafahanao misafidy amin'ny karazany maro amin'ny vidiny ambany noho izay azonao eritreretina.
Mazava ho azy, raha aleonao manao palitao, dia manana safidy foana ianao ary bebe kokoa amin'ny orinasa. Satria izy ireo ihany koa dia miseho miaraka amin'ny endriny midadasika mba hamela antsika ho mora manambatra azy ireo amin'ny t-shirt na akanjo ba eo ambanin’izy ireo. Fotoana izao hisafidianana akanjo malefaka sy tsotra, miaraka amin'ny bokotra lehibe mba hanome ny akanjo ho toetra bebe kokoa, raha azo atao. Ny loko tsy miandany na fototra no ho mpilalao fototra mandrakizay.
Mazava ho azy ho an'ity vanim-potoana ity ny iray amin'ireo akanjo fototra indrindra dia mianjera amin'ny palitao. Satria izy ireo no mamela antsika hahazo aina kokoa ary mazava ho azy, lavitry ny hatsiaka foana. Noho izany, amin'ny lafiny iray dia mamonjy hevitra tonga lafatra kokoa eo amin'ny fivarotana Mango izahay ary izany dia akanjo azo averina. Noho izany dia manana roa ho an'ny iray izahay ary tianay izany: Amin'ny lafiny iray, ny vokatry ny hoditra ary amin'ny lafiny iray, dia ny volo no mitazona antsika mafana.
Fa raha tia palitao dia izay Tsy lao amin'ny lamaody toy ny volon'ondry izy ireo ary double breasted, vintana ianao. Toa nahatsikaritra azy ireo koa ny orinasa. Satria izy ireo dia fototra ary ahafahantsika mamorona endrika sy endrika samihafa. Avy amin`ireo izay mitambatra amin`ny pataloha jeans toy ny hafa semi-formal amin`ny pataloha lamba. Miankina aminao!
Akanjo sa zipo?
Raha toa ka sarotra aminao ny misafidy, dia tsara raha misafidy ny roa ianao. Satria amin'ny lafiny iray Ny akanjo midi sy ribbed dia iray amin'ireo fototra lehibe indrindra. Hany ka afaka miaraka amin'ny akanjo lava, fehikibo malalaka na tsy misy na inona na inona hanome azy ireo ny lazany. Amin'ny lafiny iray, ny zipo amin'ny lohalika misy printy amin'ny loko fototra dia iray amin'ireo fomba tsara indrindra hampidirana ny lamaody amin'ny fiainantsika andavanandro.
pataloha denim sy overalls
Ny fomban'ny cowboy dia tsy ho very eo amin'ireo akanjo fivarotana amin'ny Mango. Saingy amin'ity tranga ity dia tiantsika ny hanasongadinana azy ireo amin'ny bib. Satria iray amin'ireo akanjo izay manome fampiononana lehibe foana ary noho izany dia mendrika ny ho eo amin'ny fiainantsika izy ireo. Ankehitriny, tsy lavitra ny pataloha mahitsy sy lamba. Satria afaka mitafy azy ireo any am-piasana na any amin’ireny fivoriana lehibe ireny isika. Na izany na tsy izany, miandry anao any amin'ny fivarotana izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » lamaody » Inona no hotafiko » Akanjo fototra izay ho hitanao amin'ny fivarotana Mango
Ny toro-hevitra tsara indrindra amin'ny dia
5 fahavalon'ny fifandraisana